[Thursday, October 5th, 17] :: Shabeel dad ku weeraray Soomaaliya
Wanlaweyn (RH) Akhriste waa laga yaabaa in marar badan aad Idaacadaha, Telefishanada iyo noocyada kale ee warbaahinta ka maqashay ama aad ka aragtay dad ku dhintay ama ku dhaawacmay, qarax, dagaal iyo abaar, balse goomr ayaa kugu dambeestay duur-joog weerartay dad.
Saaka waaberigii ayaa Shabeel meel uu ka yimid la aqoon,waxa uu weerar ku qaaday qaar ka mid ah dadka ku nool degmada Wanlaweyn ee gobalka Shabeelleha Hoose.
Inta la ogyahay 7 qof ayaa ku dhaawacmay weerarka uu soo qaaday Shabeelka waxaa ku jira carruur.
Guddoomiyaha degmada Wanlaweyn Maxamed Siidow Cabdiraxmaan ayaa VOA u sheegay in arrintaas ay ka dhacday xaafadda Caanoole oo ka tirsan degmada Wanlaweyn.
“Markii horre waxaa arkay Shabeelka nin mooto ka shaqeeya oo uu weeraray markii dambana waxa uu galay guri ku yaalla xaafada Caanoole halkaasoo markii dambe uu dad kale wax yeelo soo gaarsiiyey” ayuu yiri guddoomiyaha.
Guddoomiyaha ayaa sheegay in markii dambe go’aan lagu gaaray in la dilo Shabeelka, sidaasna ay dileen ciidamada ammaanka ee degmada.
“Guri ayuu galay oo lagu soo xiray waxaa la qaatay Sallaan kor ayaanna laga toogtay”ayuu yiri guddoomiyaha degmada Wanlaweyn.
Waa markii ugu horreysay oo Shabeel uu weerar ka geesto isla markaana lagu arko degmada Wanlaweyn.